Digaag | November 2019
Ugu Weyn Ee Digaag
Sidee caanaha loo isticmaali karaa jirka?
Fiiri ma aha oo kaliya miro aad u dhadhan leh, taas oo, thanks to ay macaan iyo juiciness, dhaafaa inta badan ee miraha la yaqaan, waxay leedahay walxo badan oo waxtar leh, taas oo ka dhigaysa hogaamiyaha ee doorashada macaamiisha. Faa'iidooyinka miro-baxan waxaa sidoo kale lagu arkaa kondhomoolojiyada, waxaana si firfircoon loogu isticmaali karaa diyaarinta maskadaha, daboolka iyo qalabka kale ee quruxda badan.
Cirifka la qalajiyey: Guryaha muhiimka ah, sida loo qalajiyo oo loogu kaydiyo guriga
Mid kastoo ugu yaraan hal mar nolosheyda ayaan isku dayey in aan la cuni karin khudaar - khudradda la qalajiyey, laakiin dad badani ma maqlin fangaska la qalajiyey, kuwaas oo sidoo kale ma aha oo kaliya dhadhan fiican, laakiin sidoo kale cunto aad u faa'iido leh. Maanta waxaad baran doontaa wixii fardaha la qalajiyey, waxa faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka mirahaas. Waxaan sidoo kale ka sheekeyn doonaa wax soo iibsiga iyo kaydinta qalajinta.
Dhirta caanaha: faa'iidooyinka iyo waxyeellada
Waxyaabaha ugu xiisaha badan ee miro guduud ah waa in ay leedahay gebi ahaanba waxba ma leh in ay la sameeyaan berde. Si kastaba ha ahaatee, qaabka saafiga ah, si kastaba ha ahaatee, waxay u eg tahay mid la mid ah miraha la qalajiyey, sida berde ayaa sidoo kale loo yaqaan, laakiin kuma dhacdo cid loo waco shaxan macaan. Meel kale oo ka mid ah Galbeedka, waxa loo yaqaan 'donut' foomka isku midka ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Digaag 2019